Cishe wonke umuntu okungenani kanye ngonyaka kwenzeka unomkhuhlane. Lokhu uphawu ngokuvamile kwenzeka lapho hypothermia noma esihambisana izifo eziningi ezithathelwanayo. Wayevame kuletha ukungakhululeki, futhi kungaholela yezinkinga, ngoba abantu abaningi bazama ukuqeda kuye masinyane ngangokunokwenzeka.
Eqinisweni, ukwelapha amakhala yisisu usuku olulodwa, kungase kube kuwufanele nje unamathele izincomo ezimbalwa ezilula. Omunye main - ke ukugeza lwamafinyila. Kulokhu, it is esenzelwe abadala kanye nezingane. I ngaphambili ukuqala le nqubo, ithuba kancane ukuthi isifo luqine ngokwengeziwe. Ukuze nokugeza usebenzisa amanzi abilisiwe lapho siphela isipuni esigcwele baking soda nosawoti (ukuba 1 inkomishi). Kungenzeka ukusebenzisa nosawoti noma uthenge okuthile ekhemisi amalungiselelo akhethekile equkethe amanzi olwandle ( "Aqua Maris" "Akvalor", njll). Lapho izimpawu zokuqala of umkhuhlane, qala ukusebenzisa izindlela idatha, kanye ezinsukwini zakuqala kuyinto efiselekayo izikhathi 6 ngosuku. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukuphinda kubo izikhathi 2-3 ngosuku, kuhlanganise, ngenjongo zokuvimbela. Nokho, izidakamizwa kakhulu kuleli qembu abavunyelwe ukusebenzisa, ngisho ezisanda kuzalwa.
Omunye amathiphu, indlela ukwelapha amakhala yisisu usuku olulodwa - ukwenza ekhaleni gaphambi. Ukuze wenze lokhu, thatha amaqanda abilisiwe ekhaya, ostuzhennoy ukuba kangangokuthi kwakunokwenzeka uwaphuze esandleni. Ngaphezu kwalokho, zisetshenziswa nhlangothi zombili ikhala kuze kube yileso sikhathi, kuze epholile ngokuphelele. sekuqala ukufudumala Ngakho itheku maxillary.
Ukukhuluma kanjani ukwelapha amakhala yisisu usuku olulodwa, ungakhohlwa mayelana zindlela ngempumelelo njengoba ephefumula. Ngenxa yale njongo, amanzi ukufuthelana epanini lapho engezwa amaconsi ambalwa i amafutha abalulekile (pine, sage, fir njll). Ngidinga imizuzu embalwa uhogele isisi ngaphansi ithawula. Futhi, kwezinye izimo, lapho ngezinye izindlela behluleka, ukuncoma iconsi amafutha abalulekile, kuhambisana propolis.
Isikhathi esining impela, le zokupheka of imithi yendabuko ukusiza ukuphendula umbuzo - indlela ukwelapha umkhuhlane ngosuku olungu-1, okuyinto, kuhlanganise ephelezelwa amakhala yisisu. Kukhona ngempela into evamile ngoba kwelashwa lwesinaphi yomile. Lolusiko usephendukele yi Siberians, futhi akuyona into inkimbinkimbi. Bagqoke up for the night esinqeni ukotini amasokisi, lapho powder ugcwele. Top ungakwazi ukugqoka uboya.
Futhi, njengoba nakuyicabanga, ungenza okugeza lwesinaphi usawoti unyawo. Ngenxa yalesi, 10 amalitha amanzi abilayo ethelwa futhi 2/3 inkomishi usawoti lwesinaphi ingilazi. Inqubo ihlala nje amanzi kubhavu iqala kudambe, kodwa ekugcineni - akukho kuka isigamu sehora. Amanzi Kunconywa ukuthatha lokushisa esiphezulu ezingamelana nezinselele. Kumele kuqashelwe ukuthi le ndlela kanjani ukwelapha umkhuhlane ikhanda ngoba usuku 1 is contraindicated kubantu abane varicose emithanjeni nokuba isifo senhliziyo.
Uma isifo zisaqala, kuzosiza iodine abavamile. Ungakwazi ukuphefumula ngababili, ngokuletha ibhodlela ekhaleni lakhe, noma ukudweba kubo phezu kwamaphiko ekhaleni, futhi emapheshana elincane ubuthongo. Ngu ekuseni ukuminyana ngizodabula.
Ayikho amathuluzi ayisasebenzi ukusiza kulo magazini, kanjani ukwelapha amakhala yisisu usuku olulodwa - lena anyanisi. Lezi zitshalo kukhona imithi elwa namagciwane zemvelo eziyingqayizivele ube nenamba enkulu izakhiwo ewusizo. Ngokwesibonelo, ungakwazi ugaye onion ukugeza donsa evala yayo kuze kube yilapho yonke kumenze. Ngalesi sikhathi, inani isikhwehlela kungase kukhule, njengoba kukhona ukuhlanzwa engokwemvelo ngalo ingaphakathi acinene. Inqubo liphindwe izikhathi eziningana. Kungaba amahora ambalwa kuphela izinkumbulo abasele komkhuhlane. Kungabuye esetshenziselwa instillation ku acinene izindima onion juice, Nokho, kufanele buhlanjululwe ngamanzi, okungcono ubiliselwe isilinganiso 1 kuya kwelesi 2, kusukela ngenye kunobungozi ashise ulwelwesi lwamafinyila. Yenza okufanayo ne garlic.
I-Gameplay kanye nezimpendulo kumdlalo "I-Sharp Eye" - wonke amazinga obunzima